असोज महिना कुन राशिलाई कति शुभ, कति अशुभ ? हेर्नुहोस् टिप्ससहित « Lokpath
18 September, 2019 7:41 am
असोज महिना कुन राशिलाई कति शुभ, कति अशुभ ? हेर्नुहोस् टिप्ससहित
प्रकाशित मिति : 18 September, 2019 7:41 am
काठमाडौं | आज मिति २०७६ साल असोज महिनाको १ गते बुधबार | हेर्नुहोस् तपाइको लागि असोज महिना कति शुभ कति अशुभ ? मासिक राशिफल
मेष राशिका लागि असोज महिना नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । विशिष्ट व्यत्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,९ र शुभ रङ्ग कालो वा पहेँलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महालक्ष्मीजीको दर्शनगरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृष राशिका लागि असोज महिना ठुला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाईएला । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । महिनाको अन्त्य बाटराजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,९ र शुभ रङ्ग रातो वा घुर्मैलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि गणेशजीको दर्शनगरी गरेको कार्य बाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
यो महिनामा मिश्रित फल मिल्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्नेछ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि केहि संघर्श गर्नु पर्नेछ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था आउला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । महिनाको उत्तरार्ध बाट ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,४ र शुभ रङ्ग हल्का पहेंलो वा रातो हो । शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महाकालीजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा शुभफल प्राप्त हुनेछ ।
कर्कट राशिका लागि असोज महिना राम्रो फल मिल्नेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नयाँ वस्त्र, अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । नजिकका व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । वैदेशिक यात्राको योग छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,९ र शुभ रङ्ग सेतो वा रातो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि सूर्य भगवानको ध्यान गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
सिंह राशिका लागि असोज महिना नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । वाहान लाभ हुने समय छ । जोश जाँगर र हिम्मत वढ्नेछ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा औसत लाभ हुनेछ । सजिलै अरुको बिश्वास जित्न सकिनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,८ र शुभ रङ्ग रातो वा केशरी हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बिष्णु भगवानको दर्शनगरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो महिनामा वाक्चतुर्याईँले सङ्कल्प सिद्ध हुनेछ । विपरीत वर्गप्रति आकर्षण बढ्नेछ । लामो यात्रा सुखद र सफल हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्र बाट सफलता मिल्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय छ । मध्य महिनाबाट आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,७ र शुभ रङ्ग हल्का गुलावी वा आकासे नीलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व मृत्युञ्जयाय भगवानको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
तुला राशिका लागि असोज महिनामा तपाईंको राशिबाट बाह्रौँ भावमा सूर्यले भ्रमण गर्नाले त्यति राम्रो फल मिल्नेछैन । अरूको वचन टाल्न नसक्दा दुःख पाइनेछ र खर्च पनि हुनेछ । व्यर्थको सास्ति खेप्नु पर्नेछ । महिनाको अन्त्यमा काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै लाभ हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ६,८ र शुभ रङ्ग सेतो वा नीलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि हनुमानजीको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
वृश्चिक राशिका लागि असोज महिना लाभदायी रहनेछ साथै आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । जोश,जाँगर र हिम्मत बढ्ला । कुटुम्ब बाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । वैदेशिक यात्राको योगपनि बन्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ४,८ र शुभ रङ्ग कालो वा नीलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि शिवजीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अधिक लाभ हुनेछ ।
यो महिना समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । ठुला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रसंसा गर्नेछन् । कला र गलाको प्रभाव बढ्दै जानेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । ब्यापार ब्यबसायबाट आम्दानी हुनेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ३,५ र शुभ रङ्ग हरियो वा सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि विघ्नहर्ता गणेशजीको पूजा अर्चना गरि गरेको कार्य बाट अधिक सफलता मिल्नेछ ।
सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै कला साहित्यका क्षेत्रमा विशेष लगाव रहनेछ । इच्छा र आकाङ्क्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । रमाइलो भेटघाट हुनेछ । मुद्धा मामिलामा सफलता पाईनेछ । महिनाको उत्तरार्धबाट अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्श गर्नु पर्नेछ । नजिकका व्यक्तिबाट कार्यमा बाधा आउला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क २,७ र शुभ रङ्ग सेतो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि महादेवको आरधना गरी कार्य आरम्भ गर्दा अधिक लाभ मिल्नेछ ।
यो महिनामा स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि विशेष संघर्श गर्नु पर्ला । नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । पढाइलेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने देखिन्छ । मध्य महिनामा बैदेशिक क्षेत्र बाट सफलता मिल्नेछ । घर, जग्गा खरिद तथा बिक्रिको योग छ । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क ५,६ र शुभ रङ्ग पहेंलो वा रातो हो । कुन शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि बगलामुखीको ध्यान गरी आरम्भ गर्दा अत्यन्त लाभ प्राप्त हुनेछ ।
यो महिनामा स्थान परिवर्तनका विशेष योग देखिन्छन् । आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा पुग्न सक्छ । छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । आफ्नै दक्षतामा विभिन्न कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन् । महत्त्वकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । यो महिनाको लागि शुभ अङ्क १,६ र शुभ रङ्ग सेतो वा निलो हो । कुनै शुभकर्म गर्नु अघि विष्णुभगवानको आरधना गरी यात्रा गर्नाले अधिक सफलता मिल्नेछ ।
(अधिक जानकारीको लागि )
लोकपथ डटकमले चिकित्सकसँग प्रश्न राखेर, भोटिङ पोलबाट मत संकलन गरेर, विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारेको यी टिप्सहरु पढ्नुभएको थियो ? लिंक पढ्न आफूलाई ईच्छा लागेको हेडलाईन्समा क्लिक गर्नुहोस् । अनि समाचार सूचना. जानकारी तथा मनोरञ्जनको लागि नेपालको विश्वसनिय अनलाईन मिडिया लोकपथ डटकम www.lokpath.com लग ईन गर्नुभएमा हरपल अपडेट गरेका समाचार तपाईसम्म तत्कालै पुग्नेछ । बेल आईकनमा क्लिक गरी www.lokpath.com लाई सब्स्क्राईब गर्नुभयो भने हामीले साईटमा पोष्ट गर्नेबित्तिकै तपाईकहाँ नोटिफिकेसन जानेछ । सूचना, जानकारी, मनोरञ्जन, उत्प्रेरणामुलक अडियो, भिडियो, फोटो तथा मल्टिमिडिया सामाग्री तत्कालै थाहा पाउनुहोस् । किनकी अब एक क्लिकमा संसार तपाईको हातमा छ ।
1. शरिरमा निलो दाग देखापर्दा बोक्सिले चुसेको भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ यस्ता छन् कारणहरु !
2. सावधान मृगौला फेल हुनु अघि देखिन्छन् यस्ता संकेतहरु, कसरी बच्ने जानी राखौं
3. सावधान यी ५ समस्या भएका व्यक्तिले भुलेर पनि कागती पानी नखानुहोस्
4. मिर्गौलामा पत्थरी भएको कसरी थाहा पाउने जान्नुहोस् !
5. तपाईको सिरानीमुनी के छ ? बास्तुशास्त्र भन्छ, यी कुरा राखेर सुत्दा फलिफाप
6. सेतो पुतलीले बनाउन सक्छ दृष्टिविहीन, यसबाट बच्न अपनाउनुस् यस्ता उपाय
7. प्रेसर हाई छ ? के खाने, के नखाने यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा (टिप्ससहित)
8. मंगलबारको व्रत लिनुहुन्छ के गर्ने, के नगर्ने यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा
9. दैनिक ५ दाना छोकडा खाँदा शरीरलाई यस्तो फाइदा मिल्छ भने किन नखाने ? टिप्ससहित
10. पेटको बोसो घटाउने हो ? दैनिक खानुहोस् यी खानेकुरा (टिप्ससहित)
11. व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने चिकित्सकको यस्तो सुझाव
12. शारिरीक सम्पर्कमा मानिसहरु कति समयसम्म टिक्छन् जान्नुहोस्
13. अनुहारमा कोठी छ ? घरेलु उपायबाट यसरी हटाउनुस् टिप्ससहित
14. सेतो पानी बग्ने समस्याः डाक्टरका टिप्स र भान्छाकै औषधीले गायब हुनसक्छ
15. यौन सन्तुष्टिबारे महिलाहरुले झुट बोल्नुको कारण यस्तो पो
16. थाहा पाउनुहोस् कस्तो अनुहारलाई कस्तो चस्मा सुहाउँछ !
17. शारीरिक सम्बन्धलाई सुखमय बनाउन चाहानुहुन्छ अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
18. आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्न यी तरिका अपनाउनुहोस्
19. यस्ता छन् निगुरोका फाइदाहरु
20. आँखा वरिपरी ‘डार्क सर्कल’ छ ? भान्छामै छन् यी औषधी (उपयोगी टिप्ससहित)
21. पसिना गन्हाउँछ ? भुलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा
22. बिहान उठ्ने वित्तिकै लामो श्वास लिनुका फाइदाहरु
23, विवाहपछि युवतीहरु मोटाउनुको कारण यस्तो पो रहेछ
24. यी हुन् यौ न सम्प र्कका लागि सबैभन्दा ‘खतरा’ तरिकाहरु, हेर्नुहोस्
25.विवाहअघि पुरुषले बोल्छन् यस्ता ६ झुट, थाहा पाइराख्नुहोस्
26. तपाईमा पनि यस्तै समस्या देखा परेको छ ? सावधान चिकित्सकलाई भेटिहाल्नुस्
27. प्रेम सफल बनाउने हो ? अपनाउनुहोस यस्ता उपाय
28.होशियार यस्ता ५ सपना झुक्किएर पनि अरुलाई नसुनाउनुस्
29. यी ६ गुण भएका युवतीहरु भाग्यमानी हुन्छन्
30. १० लाख मानिसद्वारा आत्महत्या २०२० मा दोब्बर हुने, यस्तो छ मृत्यु रोज्ने कारण
31. यसकारण खानैपर्छ उम्रेका गेडागुडी
32.किन कपाल झर्छ ? यस्ता छन् कारण र बच्ने उपाय
33.अनुहारको दागधब्बा हटाउने देखी यस्ता छन् फिटकिरीका फाईदै फाइदा
34.बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता टेक्निक !
35.ग्यास्ट्रिकको समस्याले सतायो ? झुक्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा
36.उठ्नेबित्तिकै शारीरिक सम्पर्क गर्दा यस्तोसम्म फाइदा
37. होसीयार ! अदुवा नखानुस् यी रोग भएकाहरुले (उपयोगी टिप्ससहित)
38. दम्पतीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर हुनुपर्छ ? जान्नुहोस्
39.कुन बार जन्मने मानिसको स्वभाव र भाग्य कस्तो हुन्छ ? हेर्नुहोस्
40.‘प्रेसर लो’ भएका व्यक्तिहरुले खानुहोस् यी १० खानेकुरा
41.यौ न सम्पर्क बाटै निको हुन्छन् यी ५ रोग !
42. यी ११ सपनाले मानिसको मृत्युको संकेत गर्छ
43. विवाहित महिलाप्रति पुरुष आकर्षित हुनुको कारण यस्तो
44.यसकारण साउन महिनामा भुलेर पनि मासु र रक्सि नखानुस्
45.शारीरिक सम्बन्धको विषयमा महिलाहरुले सोच्छन् यी १० अनौठा कुरा
46. प्रेममा निकै बफादार हुन्छन् यस्ता युवती, तपाई पर्नुहुन्छ
47.तपाईंलाई याद छ विवाहपछि युवतीमा देखिन्छ यस्तो परिवर्तन
48.यस्ता व्यक्तिहरुले पटक्कै पैसा बचाउन सक्दैनन्
49.हाँस्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ मान्छेको स्वभाव, तपाई कस्तो हाँस्नुहुन्छ
50. किन दुख्छ कम्मर यस्तो छ उपचार विधि
51.तपाईलाई फेसबुकमा कसले अनफ्रेन्ड गर्यो थाहा छ यसरी थाहा पाउन सकिन्छ
52. होसीयार खाली पेटमा नखानूस् यी खानेकुरा, विष बन्न सक्छ
53. प्रेसर जाँच गर्दै हुनुहुन्छ जाँच्नुअघि ध्यान दिनैपर्ने कुराहरु यस्ता छन्, थाहा पाइराखौं
54. यी ८ व्यक्तिले भुलेर पनि मेवा खानु हुँदैन, जानी राखौं
55. सावधान यी व्यक्तिले भुलेर पनि दहि नखानुहोस्
56. यसकारण बेलुकाको खाना चाँडै खानुहोस्
57.लामखुट्टेले कस्ता मानिसलाई बढी टोक्छ जानी राखौं
58.यौ न सम्प र्कपछि के चाहन्छन् महिलाहरु, जानी राखौं
59. हस्तमैथुन गर्नुका फाइदाहरु यस्ता छन्, जानी राखौं
60. यी अंगमा सुन भुलेर पनि लगाउनु हुँदैन, यस्तो छ कारण
61. यी ५ किसिमका रोगीले भुलेर पनि लसुन नखानुस्
62. कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ जान्नुहोस्
63. यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की !
64. नेपाली महिलाहरु बत्ति बालेर यौनसम्पर्क गर्न नचाहनुको कारण यस्तो
65. नियमित शारिरीक सम्पर्क डिप्रेसन गायब, यस्ता फाईदा
66. ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ होशियार ज्यानै जाला
67. यौनसम्पर्क गर्दा महिलाहरुले आवाज निकाल्नुको कारण यस्तो
68. बिहेअघि नै यौनसम्पर्क भए नभएको थाहा हुन्छ कि हुँदैन जान्नुहोस्
69.महिलाले सधैं गोप्य राख्छन् यी ७ कुरा, ती के हुन् थाहा पाइराख्नुस्
70.कष्ट हटाउन सोमबार यी ७ कुरा गरे पुग्छ‘ (थाहा पाउनैपर्ने टिप्स )
71.सावधान ! गर्भ अवस्थामा भुलेर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा
72.तपाई पोर्न फिल्म हेर्नुहुन्छ होसियार ! यस्तो समस्या आइलाग्ला
73.पुरुषका लागि पनि गर्भनिरोधक जेल, वैज्ञानिक भन्छन् ‘यसरी प्रयोग गर्नुहोस्’ )
74. उमेर छँदै बच्चा जन्माइहाल्नुस्, नत्र यस्तो समस्या आइलाग्ला
75. वाईफाई स्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? स्पीड दोब्बर बनाउन अपनाउनुस् यी उपाय
76.के तपाई मुखमा घाउ आएर हैरान हुनहुन्छ अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय
77.पुजा गर्दा झुक्किएर पनि नर्गनुस् यी गल्ती , धर्म हैन पाप लाग्ला !
78. बच्चाको उमेर अनुसारको उचाइ र तौल कति हुनुपर्छ ? जानी राखौं
79.तौल घटाउने हो ? बिहान उठ्ने बित्तिकै यसो गर्नुहोस्
80. तपाईंको बेडमा यी कुरा मिलेका छन् ?
81. कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ? जानी राखौं
82.के तपाईलाई रिँगटा लाग्छ ? सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत हुनसक्छ
83.कमाइ भन्दा बढी खर्च भएर निराश हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी तरिका
84.यी ४ समस्या भएका व्यक्तिले भुलेर पनि केरा नखानुहोस्
85.रक्सी खाएपछि के खाने, के नखाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुरा
86.के तपाइ नराम्रो सपनाबाट हैरान हुनुहुन्छ ? सिरानीमूनि राख्नुहोस् यी चीज
87.सावधान !जहाज चड्दा भुलेर पनि नगर्नुस यी १० गल्ति, नत्र….
88.तपाईको तौल कति छ ? जान्नुहोस् उमेर अनुसारको तौल कति हुनुपर्छ (उपयोगि टिप्ससहित)
89. सावधान ! यी ९ खानेकुरा धेरै खानाले तालु खुइलिन्छ !
90. यस्ता छन् पाकेटमारका कोडभाषा, थाहा पाइराख्नुस् !
91. रुघाखोकी र ज्वरो आएमा यसरी हेरचाह गरौँ !
पाल्पा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा कोरोना परीक्षण गर्न
हेर्नुहोस् असोज ११ देखी असोज १७ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ
हेर्नुहोस् २०७७ साल असोज ११ गतेको राशिफल
काठमाडौं । वि.सं. २०७७ साल आश्विन ११ गते । आईतवार । इ.स. २०२०
आज पद्मिनी एकादशी, व्रत बसस्दा हुन्छन् यस्ता फाइदा !
काठमाडौं । प्रत्येक दुई वा तीन वर्षमा पुरुषोत्तम मास वा मलमास पर्ने गर्दछ
विश्वभर अपडेटः कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख नाघ्यो